रुकुम घटनामा रेखाको प्रश्न : नेपालमा केटी मान्छेको बेइज्जत गरेर मात्र न्याय पाउने हो र ?
कोशी अनलाइन बुधबार, २१ जेठ, २०७७ मा प्रकाशित
विराटनगर, २१ जेठ । ६ जना व्यक्तिले ज्यान गुमाएपछि रुकुम घटना प्रकरण चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । युवती भगाउनका लागि पुगेका यी युवकहरूको हत्या भएको हो ।
उक्त विषयमा धेरैले आफ्नो आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन् । यो विषय बढ्दै जादा नायिका रेखा थापाले भने केही फरक विचार ब्यक्त गरेकी छिन् ।
रेखाले घटनाकी प्रेमीकाको बचाउमा आवाज उठाएकी छन् । उनले दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै किशोरीमाथि चरित्र हत्या नगर्न आग्रह गरेकी छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा उक्त किशोरीलाई तल्लो तहमा पुगेर गालीसमेत गरिएको छ ।
नेपालमा केटी मान्छेको बेइज्जत गरेर मात्र न्याय पाउने हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै रेखाले एउटा किशोरीको जीवन बर्वाद पारेर न्याय पाउने हो भने, कुनै पनि छोरीले भोलि कसैलाई माया नगर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्ताे छ रेखाको फेसबुक पोस्ट :
रुकुम घटनाका दोषीमाथि कारवाही र पीडितलाई अबिलम्म्ब न्याय दिइयोस् । यस घटनामा जोडिएकी किशोरीको बारेमा जसरी चरित्र हत्या गर्ने खालका र नारी अस्मिताको धज्जी उडाउने काम भएको छ, त्यसले फेरिपनि उत्पीडित वर्गमाथि प्रहार भयो भन्ने लाग्छ ।
समाजविरुद्ध अन्तर्जातीय प्रेम गर्ने सहास भएकी बालिकाको चरित्र हत्या गरेर न्याय हुन्छ त ? दोषीलाई कानूनी कारवाही हुनुपहिले नै एउटा केटी मान्छेले आफ्नो सामाजिक र चारित्रिक सम्पत्ति बजारमा लिलाम गर्नु पर्ने ? नेपालमा केटी मान्छेको बेइज्जत गरेर मात्र न्याय पाउने हो र ?
छानबिनको क्रममा रहेकी किशोरीको बारेमा अनर्गल कुरा लेख्ने छुट छ ? समूहमा बाहुन-क्षेत्री, जनजाती जो जसलाई गाली गर्नु छ गरे हुन्छ । एउटा केटी मान्छेको पेटिकोट समातेर बिद्रोह हुन्छ ? दोषी वा निर्दोषको किटान हुनु पहिले नै यसरी मानसिक हिंसा र प्रताडना दिएको कारण ती किशोरि नदिमा हाम्फालेमा कस्ले जवाफ दिन्छ ?
अन्तर्जातीय प्रेम गरेको सट्टा जसरी उस्को चरित्र हत्या हुँदैछ, यसले जातिवादी सोचलाई झन्र धेरै बालबालिकामा स्थापित गर्ने देखिन्छ । राज्यसँग लडनु पर्‍यो नि, एउटा १७ वर्षकी किशोरीलाई मानसिक र सामाजिक उत्पीडन किन ?
दोषी भए कानूनी कारवाही गरियोस् । यो नबिर्सौं कि एउटा किशोरीको जीवन वर्वाद पारेर न्याय पाउने हो भने, कुनै पनि छोरीले भोलि कसैलाई पनि माया गर्ने छैनन् ।